Fri, Mar 22, 2019 | 11:43:22 NST
सर्वोच्च अदालतमा भिडियो कन्फेरिन्सङ सेवा सुरु
काठमाडौं, भदौ २९ – सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई न्याय सेवामा सुनिश्चितता गर्न बिहीबारदेखि भिडियो कन्फेरिन्सङ सेवा सुरु गरेको छ ।
मंगलबार आउँदै आइफोन एट र आइफोन एट प्लस, यस्तो छ विशेषता
अमेरिकी कम्पनी एप्पलले मंगलबार आइफोनको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्दैछ । एप्पलले मंगलबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुने एक विशेष कार्यक्रममा आइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन एट र आइफान एट प्लस सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
दसैँपछि नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट, यस्तो छ विशेषता, मूल्य कति ?
काठमाडौं, भदौ २६ – सामसुङले नयाँ स्मार्ट फोन ‘ग्यालेक्सी नोट एट’ सार्वजनिक गरेको छ । नोट सेभेनको ब्याट्रिमा देखिएको समस्याका कारण गएको वर्ष समस्या भोगेको सामसुङले त्यसमा केही परिवर्तन गरे नयाँ फोन ल्याएको हो ।
फेस अफ सामसङका रुपमा मोडल ज्योत्स्ना योगी
काठमाडौं, भदौं २२ – मोडल ज्योत्स्ना योगीलाई न्यु फेस अफ सामसङको कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका प्रमुख प्रणय रत्न स्थापितले योगीलाई कदर प्रदान गर्नुभएको हो ।
ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाइल महोत्सव, यस्ता छन् छुटका आकर्षण
काठमाडौं, भदौ २२ – न्यूरोडस्थित ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्समा मोबइल महोत्सव सुरु भएको छ । ‘दसैंं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दाउ पहार नै उपहार’ योजना अनुरुप मेल सुरु गरिएको हो ।
आक्रामक मस्तिष्क क्यान्सरको उपचारमा जिका भाइरसको प्रयोग गर्न सकिने
भदौ २१ – जिका भाइरसलाई मस्तिष्क क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । विशेष गरी गर्भमा रहेका शिशुमा असर गर्ने जिका भाइरसलाई मस्तिष्क क्यान्सरबाट पीडित वयस्क व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवा (फोरजी)/लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवा थप २ शहर - कोहलपुर (बाँके) र विरेन्द्रनगर (सुर्खेत) - मा विस्तार गरेको छ ।
​एचटिसीका नयाँ स्मार्टफोन बजारमा, के–के छन् विशेषता ?
काठमाडौं, भदौ १४ – नेपाली मोबाइल बजारमा एचटिसी डिजायर ६५०, एचटिसी डिजायर १० प्रो, एचटिसी यु ११ सार्वजनिक भएका छन् । दसैँ तिहारको अवसरमा प्रत्येक एचटिसीको मोबाइल फोन खरिदमा चाँदीको सिक्का निःशुल्क पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
ओप्पो ए ३७ नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं, भदौ १२ – मोबाइल फोन ब्रान्ड ओप्पोको सेल्फी एक्स्पर्ट ए ३७ कालो रंगमा नेपाली बजारमा आएको छ । उपभोक्तालाई क्यामेरा फोनमार्फत फरक अनुभव दिने गरी ओप्पो ए ३७ कालो रंगमा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसको मूल्य १५ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ, २ – नेपालको उच्च मौसमी अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको रुसी विमान स्वदेश फर्किएको छ । एशियन मौसमी प्रणालीबारे अध्ययन गर्न एक महिनाअघि काठमाडौं आएको विमान तीन दिनअघि स्वदेश फर्किएको थियो ।
१ करोड १२ लाख पटक गरियो टेलिकमको निःशुल्क एसएमएस
बाढी पहिरोबाट पीडितहरुको उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग गर्न नेपाल टेलिकमले निःशुल्क गरेको एसएमएस सेवा अवधिमा झण्डै १ करोड १२ लाख एसएमएस निःशुल्क आदानप्रदान भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
फेसबुकमा नयाँ फिचर, युट्युब जस्तै
साउन २६ – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ भिडियो फिचर ल्याउने भएको छ । भिडियो लाइभ फिचरले सफलता पाएपछि फेसबुकको युट्युब र टिभी नेटवर्कलाई चुनौती दिने गरी विभिन्न भिडियो हेर्न मिल्ने ‘वाच’ फिचर सुरु गर्न लागेको हो ।
गुगल कम्पनीमा खलबली, कारण के ?
साउन २३ – कम्पनीका विभिन्न पदमा महिलालाई राख्ने पहलको विरोधमा गुगलका एक कर्मचारीको विचारका कारण अहिले खलबली मच्चिएको छ ।
साउन २१ – पार्किन्सन रोग फैलिनबाट रोक्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । मधुमेह रोगको उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधिको प्रयोग गरेर पार्किन्सन रोग थप बिस्तार हुनबाट रोक्न सकिने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
वंशाणुगत रोगबाट छुट्कारा पाउने उपाय, डिएनए एडिटिङ
साउन १९ – भ्रुणको डिएनएमा गरिने सामान्य परिवर्तनबाट वंशाणुगत रुपमा लाग्ने रोगबाट जोगिन सकिने वैज्ञानिकले बताएका छन् । वैज्ञानिकले पहिलोपटक एक भ्रुणको डिएनएमा रहेको मुटु सम्बन्धी रोगको वंशाणुगत अवगुण हटाएका छन् ।
दक्षिण एसियामा गर्मी तथा आद्रता अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको र यसका कारण दशौंलाख मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ । नयाँ अध्ययन अनुसार विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापक्रम बृद्धिले गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिएको हो ।
सबै फूलको पूर्वज एउटै, पृथ्वीको पहिलो फूल कस्तो देखिन्थ्यो ?
पृथ्वीमा अहिले अस्तित्वमा रहेका सबै फूलको उत्पति एकै प्रजातिको फूलबाट भएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । अहिले पृथ्वीमा रहेका फूलको पूर्वज एउटै रहेको फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
एनसेलले ल्यायो ‘डबल सापटी’ अफर, अब ४० रुपैयाँ सापटी लिन मिल्ने
एनसेलका ग्राहकले अब ‘डबल सापटी’ अफर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । एनसेलले सापटी सेवा सुरु गरेको पाँच वर्षपछि ‘डबल सापटी’ अफर ल्याएको हो ।
नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेट हड्ताल
काठमाडौं, साउन १७ – नेपालमा मंगलबार इन्टरनेट हड्ताल भएको छ । विश्वका कतिपय देशमा यो सामान्य मानिए पनि नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।
काठमाडौं, साउन १७ – मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवा (फोरजी)÷लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवा थप १० शहरमा विस्तार गरेको छ ।
टेलिकमको अफर : विदेशको फोन उठाउँदा बोनस, सस्तोमा डाटा
काठमडौं, साउन १५ – नेपाल टेलिकमले जिएसएम/सिडिएमए तथा एडिएसएल/एफटिटिएच सेवाका ग्राहकहरुका लागि प्रमोसनल अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै विदेशबाट आएको कल उठाउदा पनि अब बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ ।
यतिले ल्यायो एटिआर विमान
काठमाडौं, साउन ७ – निजी वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले पहिलोपटक एटिआर विमान भित्र्याएको छ । यति एयरलाइन्सले १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ७२ सिट क्षमताको विमान खरिद गरेको हो ।
अब मोबाइलबाटै प्राथमिक उपचार
काठमाडौं, साउन ५ – नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा तयार पारिएको प्राथमिक उपचार मोवाइल एप्लिकेशन शुक्रबार वरिष्ठ हास्यकलाकार एवं समाजसेवी मदनकृष्ण श्रेष्ठ तथा हरिवंश आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सार्वजनिक गरिएको छ ।
पृथ्वी ‘प्लानेट प्लाष्टिक’ बन्दै
पृथ्वी प्लाष्टिक ग्रह बन्दै गएको भन्दै वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताकाले पृथ्वीमा ८ अर्ब ३० करोड टन प्लाष्टिक उत्पादन भएको बताएका छन् ।
फेसबुक, ट्वीटर धेरै चलाउनुहुन्छ ? डिप्रेसनको खतरा !
साउन ४ – सामाजिक सञ्जालले युवा पुस्तामा चिन्ताको दर बढिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दुव्र्यवहार विरुद्धको संस्था डिच द लेबलले गरेको अध्ययनका अनुसार युवा पुस्तामा सामाजिक सञ्जालबाट आफूमाथि हिंसा हुनसक्ने चिन्ता तथा डर बढिरहेको पाइएको हो ।
चौथो राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडमा छनौट भएकाको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं, साउन ३ – चौथो राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडमा छनौट भएकाको नाम सार्वजनिक भएकोे छ । ओलम्पियाडमा ५ जना विद्यार्थी उत्कृष्टमा परेका छन् ।
​९ वटा विमानस्थलमा चट्याङको सेन्सर जडान
काठमाडौं, साउन १ – सरकारले ९ वटा विमानस्थलमा चट्याङको सेन्सर जडान गरेको छ । सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर, भैरहवा, पोखरा, काठमाडौं, तुम्लिङटर, विराटनगर, सिमरा र नेपालगन्ज गरी ९ वटा विमानस्थलमा चट्याङको सेन्सर जडान गरिएको हो ।
काठमाडौं, असार ३१ – फेसबुकको सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भारतमा रहेको पाइएको छ । गएको बिहिबारसम्ममा भारतका २४ करोड १ लाख जनाले फेसबुक खाता खोलेको द नेक्स्ट वेभ संस्थाले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइन सेवा स्तरोन्ती गर्ने
काठमाडौं, असार २४ – नेपाल टेलिकमले अहिले संचालनमा रहेका सम्पूर्ण ल्याण्डलाइन फोनको स्तरोन्नती गर्ने भएको छ ।
एनसेल कम्पनीमा नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त
काठमाडौ, असार २३– नेपालको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक पदमा सुरेन जे. अमरासेकरा नियुक्त हुनभएको छ । अमरासेकरालाई एनसेलको सञ्चालक समितिले नयाँ प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।
अन्तरिक्ष सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिमका लागि आवेदन खुल्यो
काठमाडौं, असार २० – नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाईटी (नासो) ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन आवेदन खुलाएको छ । साउन १६ गते सम्म दिन सकिने आवेदनका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने नासोले जनाएको छ ।
काठमाडौं, असार २० – मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले प्रिपेड तथा पोस्टपेड प्रयोगकर्ताका लागि म्याजिक भ्वाइस सेवा ल्याएको छ । ‘म्याजिक भ्वाइस’ सेवा अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रयोगकर्ताले आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारसँग आफ्नो आवाज र ब्याकग्राउण्ड साउण्ड परिवर्तन गरी मोबाइलमा कुरा गर्न सक्नेछन् ।
​सामसुङले ग्यालेक्सी नोट सेभेनकै पार्टपुर्जा नयाँ फोनमा हाल्ने, नोट सेभेनभन्दा सस्तो
असार, १९ – प्रमुख मोबाइल फोन निर्माता सामसुङले ग्यालेक्सी नोट सेभेनकै पार्टपुर्जा प्रयोग गरेर नयाँ मोबाइल बजारमा ल्याउँदै छ ।
पोखरा र दमौलीमा एनसेलले सुरु गर्‍यो फोरजी सेवा
काठमाडौं, असार १७ – मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पोखरा र दमौलीमा चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवा फोरजी÷लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवा विस्तार गरेको छ ।
विश्वभरका ठूला कम्पनीका कम्प्युटरमा साइबर आक्रमण
असार १४ – विश्वभरका ठूला कम्पनीका कम्प्युटरमा साइबर आक्रमण भएको छ । ¥यानसमवेयर साइबर आक्रमणका कारण विश्वभरका कम्पनी प्रभावित भएको बिबिसीले जनाएको छ ।
एनसेलको नयाँ अफर ‘सबैलाई उपहार हरेक दिन लगातार’
काठमाडौं, असार १४ – मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अफर ल्याएको छ । अब एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड प्रयोगकर्ताले हरेक दिन आकर्षक उपहार प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
गुगलले इयुलाई दुई खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने
असार १३ – युरोपियन युनियन इयुले सर्च इन्जिन गुगललाई २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (दुई खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिराउने भएकोे छ । गुगलले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी विज्ञापन प्रवर्द्धन गरेको भन्दै इयुले उसलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।
एनसेल डेटा बण्डलिङ्गसहित हुवावे पि–टेन प्लस बजारमा
काठमाडौं, असार १० – मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेसँगको सहकार्यमा हुवावे टेक्नोलोजिजले एनसेलको डेटा सेवा बण्डलिङ्ग र विषेश रुपमा डिजाइन गरिएको पि–टेन प्लस क्यामरा लेन्स किट उपहारसहित आफ्नो नयाँ पि–टेन प्लस स्मार्टफोन शुक्रबार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ ।